“Waxaan Doonayaa Inaan Soo Laabto” – Fariintii Uu Diego Maradona Ku Soo Qoray Instagram Ka Dib Markii Ay Nigeria Garaacday Xulka Argentina Xalayto - Laacib.net
“Waxaan Doonayaa Inaan Soo Laabto” – Fariintii Uu Diego Maradona Ku Soo Qoray Instagram Ka Dib Markii Ay Nigeria Garaacday Xulka Argentina Xalayto
Waxa ay aheyd habeen ay tahay inay iska ilaawaan Argentina ka dib markii ay iska dhiibeen hogaan labo gool ah islamarkaana ay guuldarro 4-2 ay ka soo gaartay xulka Nigeria.
Ever Banega iyo Sergio Aguero ayaa hogaan 2-0 u dhiibay Argentina ka hor inta aysan goolal dhalinin Kelechi Iheanacho iyo Brian Oduwu iyo si la mid ah Alex Iwobi oo labo gool dhaliyay taasoo guusha u sahashay xulka Super Eagles ee qaarada Afrika.
Waxa ay aheyd kulankii ugu horeysay ee ay guuldarro soo gaartay tababare Sampaoli tan iyo markii uu shaqada kala wareegay Edgardo Bauza, madaama aysan aheyn tartan rasmi ahna ma jiraan wax badan uu ka walwalo.
Laakiin Diego Maradona oo ah nin aan la ganbanin hadalkiisa ayaa Instagram soo dhigay sawir iyo qoraal aan wax caawimaad ah siineynin tababare Sampaoli.
57 jirkaan halyeeyga ayaa lagu xusuustaa doorkii uu ka qaatay hanashadii Koobka Adduunka ee Argentina ee sannadii 1986 iyo sidoo kale inuu labo sanno tababare u ahaa xulka qaranka intii u dhaxeysay 2008 iyo 2010.
Mudadii uu tababaraha ka ahaa Argentina waxa ay wajaheen guuldaradoodii ugu xumeyd abid iyadoo ay 6-1 kaga badisay Bolivia waxaana ay Koobka Adduunka uga hareen wareega sideed dhamaadka ka dib markii ay guuldarro ka soo gaartay xulka Jarmalka oo 4-0 kaga badiyay.
Laakiin Maradona ayaan sidaasi u arkin waqtigiisii uu macalinka ka ahaa Argentina isagoo soo qaatay sawir ay ku qoran tahay xaqiiqooyinka tababarayaashii soo maray Argentina, waxaana uu heystaa xaqiiqo ah inuu badiyay boqolkiiba 75 kulamadii uu hogaamiyay xulka Argentina taasoo ka badan tababarayaasha kale.
Wuxuu soo qoray: “Kumaa guulo badan? Aan go’aan gaarno, waan careysanahay sababtoo ah waxa ay lumiyeen heybadeenii, laakiin wiilashada qaladkooda ma ahan. WAXAAN DOONAYAA INAAN SOO LAABTO!!”